I-Raw Tadalafil (Cialis) powder (171596-29-5) ≥99.5% | Ukwahlula i-sex powder
/ iimveliso / Ukuxhatshazwa kwezesondo kwiHormones / ITadalafil (Cialis) ipowder
3.36 ngaphandle kwe 5 ngenxa ye 11 amanqaku umthengi
SKU: 171596-29-5. Udidi: Ukuxhatshazwa kwezesondo kwiHormones
I-tadalafil powder, i-tadalafil, i-powderfil, iyinto enobumba obumhlophe, ngokuqhelekileyo yayisetyenziselwa ukwenza iipilisi ze-tadalafil. Isidakamizwa seTadalafil, i-aslo ibiza / i-Cialis, yenye yeklasi yezilwanyana ezibizwa ngokuba yi-PDE-5 (i-Phosphodiesterase type 5) inhibitors.
I-AASraw inokusetyenziswa kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwinqanaba le-Raw Tadalafil (Cialis) powder (171596-29-5)), phantsi kolawulo lweCGMP kunye neenkqubo zokulawula umgangatho wendlela.
I-raw tadalafil (Cialis) powder Abalinganiswa basisiseko
igama: Tadalafil (Cialis) powder
I-1.AASraw inikeza i-Raw Tadalafil powder (i-Cialis powder), into enokuyenza't zifunyenwe ngeendlela ezininzi eziqhelekileyo.
I-2.AASraw inikeza zokupheka ngokubanzi kunye nesikhokelo somveliso weempahla ezingabonakaliyo (i-Cialis powder) i-Tadalafil powder.
Yintoni iTadalafil powder
I-tadalafil powder, into ebonakalayo ye-tadalafil, yinto enobumba obumhlophe, ngokuqhelekileyo yayisetyenziselwa ukwenza iipilisi ze-tadalafil. Isidakamizwa saseTadalafil, i-aslo ibiza / i-Cialis, yenye yeklasi yeziyobisi ezibizwa ngokuba yi-PDE-5 (i-Phosphodiesterase type 5) inhibitors. Ubundlobongela obuphucula iTadalafil / I-Cialis ivuselela imisipha yemida yegazi kunye nokwandisa ukuhamba kwegazi kwiindawo ezithile zomzimba. I-Tadalafil / i-Cialis kunye namanye ama-PDE-5 inhibitors angancedisa amadoda ane-erectile disys function (ED) ngokuphucula impendulo erectile xa umntu evuselelwa ngokwesondo. Isetyenziselwa ukuphatha ukungasebenzi kwe-erectile (ukungabi namandla) kunye neempawu ze-prostatic hypertrophy (i-prostate eyandisiweyo). Abantu badla ngokuthenga i-tadalafil powder kwi-purityfil ye-tadalafil. Ngaphandle kweTadalafil / i-Cialis, ezinye iziyobisi kule klasi zi-Viagra (Sildenafil) kunye noVevitra (Vardenafil), kunye noFlibanserin.
I-tadalafil ifowuni isebenza njani
I-PDE5 yi-enzyme efunyenwe kwindoda enobunzima be-erectile. Iphazamisa enye into ebaluleke kakhulu - cGMP, okanye i-cyclic guanosine monophosphate, eyona nto ibalulekileyo kwinkqubo yokulungiswa kwempilo. Ngombulelo kwi-cGMP iimpawu ezisuka kwiimbilini kwiindawo zakho zeplavic zikhuthaza ukukhululwa kwe-nitric oxide. Njengomphumo, igazi elingaphezulu liyakwazi ukuhamba phakathi kwabo, ukuzalisa izakhiwo ze-cavernous emzimbeni wakho wepeni, okwenza kube nzima kwaye kufakwe. Xa kuninzi kakhulu i-PDE5 kwaye ingenayo ngokwaneleyo i-cGMP, umzimba wakho awukwazi ukucacisa izibonakaliso ezivela ekuphelelweni kweentliziyo zakho, eziphumela ekuphelelweni okupheleleyo okanye okukodwa ukufumana ukulungiswa.
Xa uthatha i-36-iriyure ye-Cialis / tadalafil, iyanciphisa umphumo we-PDE5 kwinkqubo yakho ngokukhawuleza, ukwenza ukuxilongwa kwe-cGMP ubuyele kumanqanaba aqhelekileyo njengemfutshane njengemizuzu ye-15-45. Nangona kunjalo, njengoko isiqingatha-sobomi seTadalafil sisifutshane, isiphumo sawo siphelela kwixesha leentsuku ze-2 ukwenza i-PDE5 ubuye kwaye impilo yakho yesini-ibe nzima. Ngokuphambene noko, xa uthabatha i-Cialis / tadalafil ngamandla ngamandla onke imihla, inceda ukugcina amanqanaba enempilo ye-cGMP emzimbeni wakho, kukunika ithuba elide elilindelwe ukuzonwabisa ngesondo kwakhona. Kuthatha iintsuku ze-Cialis 4-5 ezinamandla ukuqala ukusebenza, ngoko ungalindelanga ukuba ube ngumlenze wangempela emva kokuba uthathe ipilisi yokuqala. Nangona kunjalo, inxalenye elungileyo kukuba awusoze ufumana ubunzima ebhedeni kwakhona - nje ngokuba uqhubeka uthatha i-Cialis / tadalafil powder imihla ngemihla.
Indlela yokuthatha i-tadalafil powder ngokuchanekileyo
I-raw tadalafil ngokugqithiseleyo ifika kakhulu kwimarike kwiifom ze-tadalafil; iifomsile, Xa uthatha isigqibo sokuthatha i-tadalafil, i-yuou kufuneka iguqule umthamo ngokwendlela yakho.
Kwabaninzi abantu, i-dose yokuqala ephakanyisiweyo ye-tadalafil yi-10 mg ngosuku, ngokuqhelekileyo ithathwe i-30minutes ngaphambi kokusebenza ngokwesondo (tadalafil ukuze isetyenziswe njengoko kuyimfuneko). Ngokuxhomekeke kwanele ngokwampendulo okanye kwimiphumo emibi, umthamo unganyuswa ukuya kwi-20 mg okanye wehla kwi-5 mg ngosuku. Impembelelo ye-tadalafil ingaphelela kwiiyure ze-36. Abantu abathatha imishanguzo ekwandisa amanqanaba egazi le-tadalafil akufanele kudlule umthamo we-10 mg kwiiyure ze-72 (Jonga ukusebenzisana kwezidakamizwa). Ukusetyenziswa kwimihla ngemihla ngaphandle kokujonga umsebenzi wesondo owenziwe ngonyango i-2.5 kwi-5 mg imihla ngemihla. I-Tadalafil ayifanele ithathwe ngaphezulu kweyanye imihla ngemihla.
Isicelo seTadalafil powder
Kwisixhobo sonyango sendawo, okanye esibhedlele, sinokubona lula i-cialis, eyi-tadalafil. Ewe, le nto i-tadalafil powder - enye yesicelo esiqhelekileyo isenziwa njengeziyobisi ukwenzela unyango lwe-ED, ngokuqhelekileyo ngendlela yeepilisi okanye amaphilisi, ngaphezu koko, inyaniso, i-tadalafil yayisetyenziswa kwezinye iimeko, : I
Tadalafil powder for Candy ye-Sexy
I-Tadalafil inokudibaniswa kuma-candies ukwenza amacandi aqhelekileyo ukuphucula izidingo zesini zesini. Kukho iintlobo ezininzi zeeseksi zesini eMalaysia, izithako eziphambili zivame ukuba yi-tadalafil powder, kunye ne-sildenafil powder.
I-Tadalafil i-powder for Sex coffee
Kwimarike, kukho iindidi zekhofi zesini. Ngokubanzi izithako zikhona: iCoconut Milk, iHun, iCinnamon, iCacao, i-Maca.Seko ikhofi ihlobo lokusela kunye ne-Aztec. I-flavour yincinci, kodwa ithambileyo ngokwaneleyo ukuba ibhenkce kumanqaku omntu. Le khofi yesini inezixhobo zokuphucula ngokufanelekileyo i-libido yakho. I-Maca, iCacao, iCinnamon, iNyun kunye neCoconut Ubisi kunye nokuncedisa ukukhulisa i-hormone yemveliso, ukuphucula umgangatho wesantya, ukulibazisa ukuhamba kwexesha, ishukela egazini legazi, ukuphucula umgangatho kunye nokuphucula i-sex drive.
Kithi, ngamanye amaxesha ukwenzela ukuba sibe nefuthe elinamandla okanye iziphumo ezinobuthakathaka, sinokwenza ikhofi yesondo ngokungongeza ngokwesondo ukuphucula i-tadalafil, ngokutsho kweemfuno zabaxhasi ukuba benze iziphumo zekhofi ehlukileyo.
Indlela yokuthenga i-Tadalafil powder; bathenge i-Cialis powder esuka kwi-AASraw
Tadalafil (171596-29-5) ipowder | Yenza i-tadalafil powderfil ukuthengisa i-HNMR